China Steel Frame Lattice orinasa sy mpanamboatra |Shengsong
Toetran'ny mason-koditra vy:
Ny lanjany maivana, ny fahaiza-mitondra avo lenta, ny skid-porofo, mora raikitra sy rava, ara-toekarena, fiainana lava sy maharitra, ventilated ary miditra amin'ny hazavana, mora diovina, tsara tarehy.
Fampiharana vy Frame Lattice:
Izany no be mpampiasa amin'ny sehatry ny herinaratra, petrochemical, simika orinasa, metallurgy, milina, modeling, seranan-tsambo, an-dranomasina injeniera, fanorenana, papermaking, fanafody, lamba, sakafo indostrialy, fitaterana, fitantanana monisipaly, parking-toby.
Item No. Bearing Bardity Cross Bardity Fanondroana ny tariby mitondra entana × hateviny
Bar grating, vy grating, vy grating takela-bato, nitarina vy makarakaradia natao manokana miaraka amin'ny isan-jaton'ny banga misokatra tsara, ary mety ho ampiasaina amin'ny faritra mila rivotra tsara sy ny famoahana ny hazavana.Mora sy tsotra ny fametrahana azy, ka mitsitsy fotoana.
ara-nofo:Vy malefaka (Vy karbônina ambany) / vy tsy mety
vita:hoso-doko/hot dip galvanized, tsy voatsabo, hoso-doko
Kilalao vy: araka ny karazana bar, ny vy bar grating dia mizara ho sokajy telo manaraka ireto, ny endri-javatra tsirairay dia toy izao manaraka izao:
1. fomba tsotra: makarakara vy tsotradia iray amin'ireo karazana ampiasaina indrindra.Ampiasaina indrindra ho an'ny lampihazo, lalan-dàlana, lavaka fantsakana, tohatra tohatra sns.
2. fomba serrated: tsara kokoa noho ny fomba tsotra ny fanoherana azy.
teo aloha: Rindrina fipoahana
Manaraka: Asa tanana Wire